RAVELONANAOSY MAMITIANA : MATAHOTRA FIFIDIANANA IZAY MILAZA FA TSY TOKONY HIVERENA RAVALOMANANA – MyDago.com aime Madagascar
Isaorana ny filohan’ny Ct Rakotoarivelo Mamy hoy ny Ct Ravelonanosy Mamitiana androany teny amin’ny Magro Behoririka, noho ireny teny nataony tamin’ny fanombohany fivoriana ara-potoana faharoa ho an’ny Ct ireny, izay milaza ny zavamisy eto amin’ny firenena. Matokia ianareo hoy izy, fa izahay Ct dia hanohy ny voalazany ary hanao ny lalàna rehetra. Ny antom-pisiantsika eto hoy izy, dia ny famerenana ny filoha Ravalomanana Marc eto an-tanindrazana. Raha tsy izay no mitranga dia zavatra hafa no ataontsika. Maro hoy ity olomboantendry avy any Ankazobe ity, no fanontaniana napetraky ny olona taminay mahakasika ny fahataperan’ny fe-potoana nomen’ny Sadc dia ny 60 andro izany. Isika dia manara-dalàna ary ny filoha efa nilaza izany ary efa manaraka ny paika rehetra amin’ny fiverenany izy. Ny asan’ny Sadc hoy Mamitiana dia mirona amin’ny fampodiana ny filoha Ravalomanana Marc. Noho izany dia tsy maintsy manaraka ny paika rehetra isika. Ireo miaramilan’ny Sadc ireo dia tsy tongatonga ho azy. Dada hoy ity mpanao politika ity, dia olona manara-dalàna ka ny fahatongavany eto dia tsy maintsy feno Antananarivo sy Ivato. Tsy sanatria akory hoy izy, isika no kivy. Nanao antso ho an’ireo miaramilan’ny Sadc ny tenany. Dieny mbola eto ihany ianareo hoy izy, dia mbola misy ireo miaramila tahaka anareo migadra any am-ponja. Avoahy aloha ireo ary aoka ho jerenareo izy ireny. Ny antony hoy Mamitiana, dia antony politika no nanangadrana azy ireo fa ny vahaolana politika dia efa vita tamin’ny tondrozotra. Raiso ny fepetra amin’ny fampodiana ny filoha Ravalomanana Marc satria ao ny milaza fa hisy korontana eto. Aoka hoy izy, hametraka sy hanatanteraka ny filaminana ny miaramilan’ny Sadc indrindra ny andininy faha 20. Rehefa tafaverina eto izy dia miomana amin’izany isika. Matahotra fifidianana hoy Mamitiana, izay olona milaza fa tsy tokony hiverena eto I Dada ary izay no mahatonga ny propangade mialoha ny fotoana. Ny antsika hoy ity mpikambana ao amin’ny kongresin’ny tetezamita ity,, dia ara-dalàna ihany no arahana. Tsy mila propangade izany fa ny vahoaka efa vonona amin’ny fifidianana. Aoka hoy izy, isika tsy hiroaroa hevitra avoakan’ny fitondrana. Ny antony dia efa fikiriny ho azy ny hainomanjery ary manao fafy lainga izy ireo. Nanafatra ny vahoaka I Mamitiana, mba hiray hina. Aza manaiky ny fampiadiana ara-poko hoy izy, fa tsy maintsy hitsena an’I dada isika. Aoka isika hanao fanentanana ny vahoaka any amin’ny misy antsika any amin’ny fanatevenana ny tolona.
Auteur Solo Razafy*Publié le 18 octobre 2012 Catégories Politique
4 réflexions sur « RAVELONANAOSY MAMITIANA : MATAHOTRA FIFIDIANANA IZAY MILAZA FA TSY TOKONY HIVERENA RAVALOMANANA »
Entina hamalifaliana an’i kitoza may sai dia tena kila eo i lery, ary fanontaniana efa napetrako ary mbola averiko eto ihany : Raha tena manara-dalàna marina, ahoana ireny antontan-taratasy misy soratra hoe Repoblika faha-efatra ireny ê ? Misy soratra angaha ao amin’ilay Tondrozotra fa foana ny Repoblika faha-telo ?
Manomboka amin’izany ny fanrahan-dalàna !
Mampiasa sy manao sonia an’ireny Ingahy Rakotoarivelo, ary na ny mpanao gazetiny aza milaza vao tsy ela fa TSY MITSAHATRA MANDIKA NY LALÀM-PANORENAN’NY REPOBLIKA FAHA-EFATRA ilay mpanongam-panjakàna !
Inona no voalaza ao anatin’ny Accord de Cotonou ?
Mba ampitao kely ny hafatra aza fady, fa mila fanazavàna ny vahoaka malagasy !
Aza miasa saina @ zany lalampanorenana izany intsony ianao ri Manandrambo a! Na Repoblika fahaIII io na Repoblika fahaIV dia samy tsy misy, fa ny tondrozotra izay napetrak’ireo mpanao didin’ny be sandry ireo izao no harahana. Voatery ny zanak’i Dada dia tsimaintsy mandefitra mba hodiny eto Dago na dia hita izao aza fa tsy misy fanarahandalàna ny fampiharana ny tondrozotra. Efa fantatra anie hoe ny fatahoran’i Radomelina sy ireo dinôzôro ao andamosiny ireo an’i Dada no mahatonga an’ireo manao tsambiki-mikipy e!Ny resaka accord de cotonou efa tsy raharahiny, ny tondrozotra izay izy hiany no nandrafitra azy sy nanao sonia azy ary laviny sy tsongatsongainy araka izay mahamety azy ny fampiharana azy ka inona no mampiasa saina anao amizany? Ny fanta-tsika dia tsimaintsy mody Dada na iza hatahotra ny fiverenany eto na iza faly na iza tsy faly! Efa manana mpanao lalàna sy teknisianina maro isika na dia betsaka amin’izy ireny koa aza ny mpamadika palitao sy tia vola ary tia tena sy faly @ fahorian’ny sasany. Mahereza daholo dia mba mahaiza mifanohana fa ny akanga maro hono tsy vakin’amboho e!
Tsy misy tondrozotra nanafoana Lalàm-panorenana izany eo ê ! Mba vakio tsara re ê.
Raha TOKONY HAJAINA SY MANAN-DANJA TOY NY LALÀM-PANORENANA NY TONDROZOTRA, tsy midika mihintsy izany fa NY ANDININY REHETRA AN’ILAY LALÀM-PANORENANA TEO ALOHA DIA FOANA DAHOLO !!
Hilaina ny manazava amin’ny vahoaka fa tsy manan-kery izany Lalàm-panorenana Repoblika faha-efatra izany, ary misy olona « iray » tokony hanome ohatra voalohany.
Fampiharana tondrozotra eo an-daniny, fa ny fanajàn’azy sy ny Lalàna rehetra velona ary indrindra ny Lalàm-panorenana etsy an-kilany, tsy maintsy atao ihany koa.
Inona no antony hitolomana rahatoa ka handefitra lava izao ? Miantomboka amin’ny fanajàna Lalàna ny tolona, ka izay zavatra tsy mety dia tokony ho kianina !
Betsaka loatra ny olona miteniteny foana amin’ity raharaha ity, any ka very saina sy fanahy ny vahoaka !
Ohatra izao ao amin’ny Tananews, dia misy milaza (Radanoara) fa tokony hanaovana referendum ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana ! Maninona koa tsy manao referendum momban’ny Fahazaon’ny vahoaka mihinan-kanina sy matory ?
les rigolos de militaires de la sadc ont decidé de repartir avec dàdà dans leur bagage!le delai a expiré autant quitter la transition si on a des coui….leurs
Précédent Article précédent : TSY MIARAMILA DIMY AKORY NO AFAKA HISAKANA NY FILOHA RAVALOMANANA
Suivant Article suivant : NY ZANAK’I DADA NO TOMPON’ANTOKA AMIN’NY FITSENANA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC